Ambongadiny Portable Fanazaran-tena lalina 3 Balls Spirometer havokavoka fanofanana fitaovana ara-pitsaboana mpanamboatra sy mpamatsy |MoFoLo
Fanazaran-tena amin'ny taovam-pisefoana lalina portable 3 Balls Spiromètre Fitaovam-pitsaboana ho an'ny havokavoka
Ny spirometer baolina telo dia fitaovana ara-pitsaboana manampy ny marary hanatsara ny fiasan'ny havokavoka ary fitaovana mahomby hisorohana ny fahasarotana amin'ny havokavoka.Aorian'ny fandidiana izay misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny taovam-pisefoana, indrindra fa ny fandidiana amin'ny havokavoka, toy ny fandidiana kibo, dia manampy amin'ny taovam-pisefoana ilay fitaovana.
Ny fitaovana fanazaran-tena (fanazaran-tena) dia manampy amin'ny fampivelarana, fanatsarana ary fitazonana ny fahasalaman'ny taovam-pisefoana.
Ity fitaovana fanazaran-tena (fanazaran-tena) ity dia natao ho an'ny gymnastique tsy miankina sy voafehy.
Indrindra indrindra, mety ho an'ny marary tsy am-pandriana.Noho izany, ny tsy fahampian'ny rivotra dia miteraka tsy fahampian'ny rivotra ao amin'ny faritra ambany amin'ny havokavoka.Mety ho, ny fisian'ny fanangonan-karena (indrindra fa ny phlegm) ao amin'ny faritra ambany amin'ny havokavoka.Noho izany dia handrisika ny areti-maso ny tadin'ny havokavoka.
Mba hisorohana an'izany dia tokony hanao fanazaran-tena miaraka amin'io mpitsabo io ianao amin'ny fofonaina imbetsaka isan'andro.
Ary ny mpiasan'ny mpitsabo dia mety hampianatra ny marary ny fomba fampiasana samirery ireo fitaovana rehefa hivoaka ny hopitaly.
A. Mipetraha eo amin'ny sisin'ny fandrianao raha azo atao, na mipetraha araka izay azonao atao eo am-pandriana.
B. Tazony amin'ny toerana mahitsy ny spirometer famporisihana.
C. Apetraho eo am-bavanao ny vavanao ary fehezo mafy ny molotra manodidina azy.
D. Mifofofofo tsikelikely sy lalina araka izay tratra.Avelao ny baolina voalohany mbola eo amin'ny farany ambany.efitrano 600cc hiakatra ambony;ny baolina roa hafa mbola eo ambany.
E. Ampitomboy ny fofonainao, avelao hiakatra ambony ny baolina faharoa ao amin'ny efitrano 900 cc;ny baolina fahatelo mbola eo ambany.
F. Ampitomboy hatrany ny fofonainao;avelao ny baolina telo hiakatra ambony.
G. Tazony lava araka izay azo atao ny fofonainao.Esory avy eo ny vava ary atsangano moramora ary avelao ny baolina hianjera any amin'ny faran'ny tsanganana.
H. Mialà sasatra segondra vitsy ary avereno dingana iray hatramin'ny fito farafahakeliny in-10 isan'ora.
I. Aorian'ny fofonaina lalina in-10 isaky ny mifoka rivotra dia mikohaka mba hahazoana antoka fa madio ny havokavokao raha misy ratra ianao, tohano ny tsipìkao rehefa mikohaka amin'ny fametrahana ondana mafy eo amboniny.
J. Rehefa afaka mivoaka soa aman-tsara eo am-pandriana ianao dia mandehana matetika ary manaova kohaka.
Anaran'ny vokatra PVC 3 baolina famporisihana spirometer
ara-nofo PVC kilasy medikaly
mpampiasa Olon-dehibe, zaza, zaza
loko Orange, manga, maitso na mahazatra
Fonosana Fonosana 1pcs/blister
Fampiasana Hopitaly/Mpitsaboana/Clinique/Fanadihadiana ara-batana
Ampiasaina indrindra izy io mba hamerenana amin'ny laoniny ny fofonaina ara-dalàna ny marary izay vao vita ny fandidiana thoracic sy kibo.
Type Fitaovana fanazaran-tena ara-pitsaboana
2. Manohana ny fitsidihan'ny saha izahay, ny fanaraha-maso ny kalitao, ny entana ara-potoana
teo aloha: 100% Medical Grade PVC Closed Wound Drainage System Spring Type High quality ho an'ny fandidiana tokana
Manaraka: Tapa-kazo fanariana sponjy am-bava fanariana
Tanjona Spirometer famporisihana
Fanentanana Spirometer Normal Range
Insentif Spirometer Walgreens
Inona no atao hoe Spirometer